Northeasternd University - Education na United States of America
Northeastern University Nkọwa
Echefukwala atụle Northeastern University
Idebanye aha na Northeastern University
Northeastern University bụ a onwe alụmdi na e hiwere na 1898.
Nkuzi ụgwọ na Northeastern University na- $45,000 (Aprox.).
Na Northeastern University, ụmụ akwụkwọ na-enweta ọkpụrụkpụ ọrụ ahụmahụ tupu ya anata diplọma ha. About 90 percent nke Northeastern undergraduates zuru ezu dịkarịa ala otu ọkachamara ngalaba-op n'oge ha na mahadum ọrụ, -arụ ọrụ maka otu n'ime ihe karịrị 2,000 -ewe mmadụ n'ọrụ na gburugburu ụwa, dị ka GEICO na MTV. Ụmụ akwụkwọ nwere ike họrọ iji wuchaa ha n'ókè na afọ anọ, na ikike nke abụọ ngalaba-Ops, ma ọ bụ afọ ise, ewu na oge atọ ngalaba-Ops. Na mpụga nke ụlọ klas na n'ebe ọrụ, e nwere ihe karịrị 300 klọb na òtù maka ụmụ akwụkwọ, gụnyere ihe 25 fraternities na sororities. The Northeastern Huskies mpi na NCAA Nkewa m chịrị mba Athletic Conference. Karịrị 3,000 ụmụ akwụkwọ na-asọrịta mpi na club na intramural egwuregwu larịị. Freshmen na sophomores na-chọrọ ibi na campus. Northeastern si campus gbasaa ya gafee 73 acres na venerable mahadum n'obodo Boston. Northeastern nwere ya nkwụsị on Boston si na ụzọ ụgbọ oloko usoro, akpọkarị T. obodo, home ka myriad kọleji, -steeped na-American akụkọ ihe mere eme na nke jupụtara n'ihe omume maka ụmụ akwụkwọ.
The mahadum na-enweta hefty research enyem kwa afọ si National Science Foundation na National Institutes of Health, nakwa dị ka Ngalaba nke nna Nche, Energy na Defense. Undergraduates na-agụsị akwụkwọ myiri nwere ike inwe idem ke research, na ọtụtụ ugbu ọrụ na-enwe kwa afọ Research, Innovation na Ọkà Mmụta Expo. Ọwọrọiso Alumni-agụnye okwu show usu Wendy Williams na aga na mbara igwe Albert Sacco. Napster nchoputa Shawn Fanning gara ma ha agụsị akwụkwọ na Northeastern.
College of Arts, Media na Design
The College of Arts, Media na Design bụ a vibrant obodo ndị ọkà mmụta, eso, na practitioners raara nye ngagharị na ọhụrụ na-ekwurịta okwu, design, na nkà.
Ebe ọ bụ na ya mgbe a tọrọ ntọala na 1922, anyị kewapụrụ n'ihu na akụkụ nile nke anyị ozi: ozizi, research, Ojiji, na mmetụta na azụmahịa omume.
College of Computer na Ozi Science
Educational mmemme ikpokọta Mgbakọ na ihe dị mkpa ngwa domain, dị ka ahụ ike ma ọ bụ obi iru ala.
Ọkachamara engineering nnyocha na-akụziri, karịsịa na ume, gburugburu ebe obibi, ahụ ike na obi iru ala ubi.
Ọzụzụ ndị na-ndú ahụike na Biomedical Research.
The School of Iwu na-akwadebe n'ọdịnihu ọkàiwu site rigorous coursework na anyị enweghị atụ Cooperative Legal Education Mmemme, nke na-enye anọ, ozi oge ọrụ ahụmahụ n'ọrụ n'ụwa nile.
Mba dị ka onye ndú na-enye na omume na-arụ ọrụ ndị ọkachamara. Anyị na-elekwasị anya na-ị, na-amụrụ; gị mkpa, mmasị gị, na ihe mgbaru ọsọ gị.
Enye ụmụ akwụkwọ a miri emi nghọta nke abụrụ ubi ndị dị otú ahụ dị ka chemical bayoloji, cognition na neuroscience, gburugburu ebe obibi na mmiri sayensị, n'ihi mmiri ọgwụ, nanoscience, na netwọk sayensị.
College of Social Sciences na Humanities
Explore intrinsic ajụjụ banyere ọdịdị ụmụ mmadụ na àgwà, nzukọ na ịrụ ọrụ nke ọha mmadụ na omenala, nakwa otú ụmụ mmadụ na-achọ mmetụta ụwa ha ịkọrọ.
Mmemme maka Undeclared Students
Anyị mbinye aka omume na experiential ịmụ ihe na-integral ụzọ anyị undeclared ụmụ akwụkwọ inyocha ha ọdịmma na ọrụ dị ka nke ọma dị ka majors.
The Anyasị Institute maka Nta Men, emi odude ke Huntington Avenue YMCA, ẹkenịmde ya mbụ na klas na October 3, 1898, amalite ihe ga-agbanwe n'ime Northeastern University n'elu N'ezie nke iri afọ anọ. The School of Law E chie ike na afọ na enyem-aka nke ihe Advisory Committee, esịnede Dean James Barr Ames nke Harvard University School of Iwu, Dean Samuel Bennett nke Boston University School of Iwu, na Onyeikpe James R. Dunbar. na 1903, mbụ Automobile Engineering School na mba e guzobere sotere School of Commerce na Finance na 1907. Day ọmụmụ malitere na 1909. na 1916, a ụgwọ e ẹkenam n'ime Massachusetts nzuko omeiwunta na-amuma usoro na ulo akwukwo ka Northeastern College. Mgbe bukwanu arụmụka na nchoputa ọ gafere na March 1916.
on March 30, 1917, Frank Palmer Speare e inaugurated dị ka ọhụrụ College mbụ President. Mgbe afọ ise gachara ụlọ akwụkwọ agbanweela aha ya ka Northeastern University ka mma na-egosipụta na-amụba omimi nke ya ntụziaka. na March 1923, na University nwetara general degree arịọrọ ike si nzuko omeiwunta, na wezụga nke A.B., na S.B., na ọgwụ na ahụ ike degrees.
The College of Liberal Arts e kwukwara na 1935. Mgbe afọ abụọ gasịrị na Northeastern University Corporation e guzobere, na a osisi nke trustees esịnede 31 University òtù na 8 si YMCA. na 1948 Northeastern iche onwe ya kpam kpam site na YMCA.
Mgbe Agha Ụwa nke Abụọ Northeastern malitere kweta inyom. Na agha izi ọganihu ndị University kere College of Education (1953), University College (ugbu a na-akpọ College of Professional Studies) (1960), na Colleges of ere ọgwụ na Nursing (1964) (mgbe e mesịrị jikọtara n'ime Bouvé College of Health Sciences). The College of Criminal Justice (1967) soro, mgbe ahụ College of Computer Science (1982) (ebe renamed College of Computer na Ozi Science).
Site n'oge n'afo 1980. na otu oge abalị COMMUTER akwụkwọ toro ka fọrọ nke nta 60,000 enrollees. site 1989-1990 University aha ama belata ka banyere 40,000 full, ọkara oge, na mgbede ụmụ akwụkwọ, na na 1990 na klas nke mbụ na ndị ọzọ na-ebi ndụ-on-campus karịa COMMUTER mmụta gụsịrị akwụkwọ. Ịgbaso ezumike nká nke President Kenneth Ryder 1989 na University nakweere a ngwa ngwa na ndị ọzọ echiche obibia ịgbanwe. Kemgbe ụwa, e ịnakwere n'etiti 7,500 na 10,000 ụmụ akwụkwọ kwa afọ dabeere na ngwa nke banyere 15,000 ka 20,000 na nabata ọnụego n'etiti 50% na 75% dabere na omume. Attrition udu bu nnukwu, na a 25% freshmen kwụsị ịga akwụkwọ na ngụsị akwụkwọ ọnụego n'okpuru 50%, na na 40% nke 5,672 Undergraduate ozi oge ụbọchị ụmụ akwụkwọ debara aha na Fall of 1984 agụsị site 1989.
Mgbe President John Curry ekpe ụlọ ọrụ dị na 1996 mahadum bi e n'usoro belata ka banyere 25,000. Abata na President Richard Freeland kpebiri ilekwasị ew ụdị nke ụmụ akwụkwọ ndị nọ na-ama na-agụsị dị ka ụlọ akwụkwọ praịm omume igwe mmadụ. Ná mmalite 1990s, mahadum bee ya Freshman klas size gburugburu 4,500 ụmụ akwụkwọ na- 2,800 iji ghọọ nhọrọ karị, na malitere a $485 nde usoro owuwu nke gụnyere obi Ụlọ Nzukọ Alaeze na, agụmakwụkwọ na nnyocha ụlọ ọrụ, na egwuregwu emmepe. n'etiti 1996 na 2006 nkezi Nọdụ scores ụba karịa 200 ihe, njigide udu bilie n'ike n'ike, na ngwa okpukpu abụọ.
N'oge University nke mgbanwe, ụmụ akwụkwọ nwetara a reorganization nke ngalaba-ịkpa usoro agụmakwụkwọ ka mma iwekota klas mmụta na-arụ ọrụ ahụmahụ. Full-oge ogo mmemme gbanwere site a anọ na-nkeji iri na ise usoro abụọ omenala semesters na abụọ okpomọkụ “minimesters”, ikwe ụmụ akwụkwọ ma amụ ihe nnọọ n'ime ha agụmakwụkwọ ọmụmụ na ahụmahụ ogologo, ọzọ substantive co-op eru.
Kemgbe mgbanwe, President Freeland si na-atụkarị n'aro mgbaru ọsọ ahụ bụ na ịgbawa na Top 100 nke U.S. News & World Report'srankings. Na nke a na-emezu site 2005 mgbanwe site n'ụzọ akwụkwọ mba nnyocha mahadum bụ zuru ezu. Freeland steepụ ala na August 15, 2006 na dochie Dr. Joseph Aoun, a mbụ onyeisi ndị University of Southern California.Aoun emejuputa a decentralized management nlereanya, enye mahadum deans ọzọ na-achị ha Amawaputala, ngalaba igo mkpebi, na fundraising.
Dị ka akụkụ nke a afọ ise, $75 nde Ọmụmụ Investment Plan na we site 2004 na 2009 na University lekwasị Undergraduate agụmakwụkwọ, isi gụsịrị akwụkwọ ọkachamara mmemme, na emmepe nke nnyocha mma. Faculty mbụ ka wusie site 100 ọhụrụ tenured na n'umu-track professors, mgbe e mesịrị gbasaa ịgụnye 300 ọzọ n'umu n'umu-track ngalaba na interdisciplinary ubi. Aoun nwekwara enịm ọzọ mesiri ike na rụọ obodo na ibe site n'ịchụso ka ndị ndú nke agbata gburugburu mahadum. Na mgbakwunye, Aoun kere ihe agụmakwụkwọ mmekọrịta na ndị ọzọ oru na Boston ebe, tinyere Tufts, Hebrew College na School nke Museum of Fine Arts.[tikeeti mkpa]
N'oge a, Northeastern agafewo mba rankings. Ọ enịm 42 na 2014-15 U.S. News & World Report’s “Best Colleges Guide”, a 7 ọnọdụ na-awụlikwa elu site na 2013-2014 na a 27 ebe uru dị nnọọ ebe ọ bụ na 2010-2011. Ufodu nesi arumaru na Northeastern na-adịbeghị anya ịrị elu na rankings na-egosi na mahadum ka "gbawara koodu" agụmakwụkwọ rankings, ebe ndị ọzọ na-atụ aro na ọ chọpụta otú "egwuregwu usoro".
Ị chọrọ atụle Northeastern University ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
photos: Northeastern University ukara Facebook
Jikọọ na-atụle nke Northeastern University.